September 2020 – Gulled Salah
Gudiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa kulamo is xog waraysi ah la qaatay maamul gobolka Karkaar iyo duqa degmada Qardho.
Waxaa maanta wafdi ka socda Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre safar shaqo ku tageen magaalada Qardho ee Xarunta Gobolka Karkaar. Gudiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa kulamo is xog waraysi ah la qaatay Duqa Degmada Cabdi Siciid Cismaan iyo Gudoomiye Ku xigeenka 1aad ee gobolka Cabdicasiis Yusuf Caamir waxayna …
Gudiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa kulamo is xog waraysi ah la qaatay maamul gobolka Karkaar iyo duqa degmada Qardho. Read More »
Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa ka qayb galay shirka qoondada Haweenka.
Gudoomiyaha Guddigga KMG ah ee doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre oo ay weheliyaan xubno guddiga ah ayaa ka qaybglay kulan ay soo abaabushay Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta arrimaha qoyska. Kulanka ayaa looga hadlayay Qoondada Haweenka ee matalaadda siyaasadda. Gudoomiyaha ayaa sheegaya in dhawaan ay bilaabi doonaan diiwaangalinta Codbixiyaasha ka qaybqaadanaya doorashooyinka golayaasha deegaanka Degmooyinka Puntland, …
Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa ka qayb galay shirka qoondada Haweenka. Read More »
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka ayaa maanta kulan kula yeeshay magaalada Nairobi xubno ka socda beesha caalamka.
Guddoomiyaha Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland Mudane Guuleed Saalax ayaa maanta kulan kula yeeshay magaalada Nairobi xubno ka socda beesha caalamka oo ay ka mid yihiin safaaradaga Midowga Yurub, Sweden, Switzerland, Denmark iyo sanduuqa xasilinta Soomaaliya (Somali Stability Fund). Waxay labada dhinac iska waraysteen dadaalada socda ee Puntland ay ugu guurayso hannaanka xisbiyada badan iyo qabsoomidda …
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka ayaa maanta kulan kula yeeshay magaalada Nairobi xubno ka socda beesha caalamka. Read More »